Thwebula Protected Folder 1.2 – Vessoft
Thwebula Protected Folder
Ifolda Kuvikelekile – ithuluzi eliwusizo for the ukuvikelwa iphasiwedi amafayela. Isofthiwe kwenza amafayela namafolda ezingabonakali ngokuphelele, ukuqinisekisa isitoreji ephephile ibhizinisi oluyimfihlo kanye nolwazi oluqondene, imibhalo, izithombe kanye video. Ifolda Kuvikelekile evimbela ukweba idatha by malware, idatha ukuvuza kolwazi lomuntu siqu noluyimfihlo. Isofthiwe inamazinga eziningana ukuvikelwa kanye ivikela ulwazi kusuka kucis ngengozi futhi virus ukutheleleka. Ifolda Kuvikelekile ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ukuvikelwa amafolda futhi amafayela
Amazinga eziningana ukuvikelwa
Vikela Ukwaziswa kusukela malware
Simple futhi kulula ukuyisebenzisa interface
Amazwana on Protected Folder:
Protected Folder Ahlobene software:
Internet Ukubethelwa Isofthiwe ukusebenza nge ubuchwepheshe VPN. Isofthiwe ine amathuluzi ukudala i channel ngekhodi njengendlela iphuzu-to-phuzu noma iseva-to-amaklayenti.
English, Français, Español, Deutsch... Hotspot Shield 6.5.1 Free
English, Français, Español, Deutsch... Kaspersky Cleaner 1.0.1.150
Ukubethelwa Isofthiwe yakhelwe ukuhlanza uhlelo, ngcono ezokuphepha jikelele, sibuyisele ukusebenza computer futhi asuse iminonjana umsebenzi kuyi-Internet.
Ukubethelwa Isofthiwe yakhelwe for ukugunyazwa othomathikhi kwi website ahlukahlukene. Isofthiwe ugcina wagcwalisa amafomu okubhalisa kanye neminye imininingwane in the isitoreji ngekhodi.
English, Français, Español, Deutsch... TunnelBear 2.3.29
Ukubethelwa Internet Isofthiwe for umsebenzi ephephile futhi elula nge VPN-amaseva. Futhi isofthiwe kwenza ukufinyelela izingosi evaliwe.
Internet Ukubethelwa Uqinisekisa kuhlala engaziwa futhi ulondekile internet. Isofthiwe isebenzisa isitoreji yayo siqu ifu ukufaka ikhowudi kwimininingo yonke imibuzo internet.
Clownfish for Skype 4.40 Standard futhi Portable
Abadlali Media Isidlali semidya ukuthi isekela ngetakhiwo letehlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba bahlele umtapo umculo nibuke engezansi.
English, Українська, Français, Español... WirelessKeyView 2.05
Internet Isofthiwe ukuze alulame elahlekile amaphasiwedi e-Wi-Fi. Isofthiwe uyalulama zonke izihluthulelo zokuphepha of WAP noma WPA ukuthi agcinwe enkonzweni uhlelo lokusebenza.
CCleaner 5.27.5976 Standard, Professional futhi Portable